हामीले पनि एउटा स्तर कायम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पैसाकै कुरा आउँछ । क्रिकेट खेलेर सम्मानजनक जीवनयापन हुन नसक्ने देखेपछि कुनै बेला मैले अष्ट्रेलिया वा युनाइटेड अरब इमिरेट्स जाने तयारी गरेकी थिएँ । अहिले हामीले जुन सफलता हासिल गरेका छौं, त्यसले अहिले मेरो मनबाट विदेश पलायन हुने कुरा हटेको छ । ।
नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान हुन्– रुविना क्षेत्री । झापाको काँकडभित्तामा जन्मिएकी क्षेत्री सन् २०१२ देखि नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान रहँदै आएकी छिन् । क्षेत्रीले नेतृत्व गरेको नेपाली महिला क्रिकेट टिम गत साता थाइल्यान्डमा आयोजित महिला ट्वान्टी–२० विश्वकपको छनौट प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान हात पारेर स्वदेश फर्किएको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर रुविनासँग साप्ताहिकका लागि महेश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी :
सन् २०२० मा हुने ट्वान्टी–२० विश्वकप र सन् २०२१ मा हुने एक दिवसीय विश्वकपको सुरुवाती छनौट प्रक्रियामा नेपाल उपविजेता भयो कस्तो अनुभव भैरहेको छ ?
हामी दुई वर्षको अन्तरालपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएका हौं । त्यसैले अनुभवको कुरा गर्दा एकदमै राम्रो अनुभव हासिल गर्ने मौका मिल्यो । थाइल्यान्डमा हामीले दुईवटा प्रतियोगिता खेल्यौं, दुवै प्रतियोगितामा हामी दोस्रो स्थानमा रह्यौं । ती दुवै प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले आयोजना गरेको थियो । आईसीसीका प्रतिनिधिहरूले पनि नेपालले आफ्नो खेलमा एकदमै राम्रो सुधार ल्याएको टिप्पणी गरेको सुन्न पाउँदा निकै खुसी लाग्यो । थाइल्यान्डमा हामीले १२ खेलमध्ये १० खेल लगातार जितेका थियौं । हामीले हारेको खेल भने एउटासँग मात्र त्यो पनि आयोजक थाइल्यान्डसँगको खेल थियो । त्यसैले पनि हामी खुसी छौं, किनभने यति धेरै वर्षपछि मैदानमा फर्कंदा पनि हामीले धेरै राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सक्यौं ।
थाइल्यान्डसँग हार्नुको कारणचाहिँ के थियो ?
हामीले एक महिनाअघि थाइल्यान्डसँग म्याच खेलेका थियौं । त्यतिबेला हामीलाई थाइल्यान्ड केमा कमजोर छ भन्ने कुरा थाहा थियो । उनीहरूको घरेलु क्रिकेट एकदमै बलियो छ । उनीहरू वर्षभरि नै खेलिरहेका हुन्छन् । अर्को कुरा, उनीहरूको घरेलु मैदानमा प्रतियोगिता भैरहेको थियो, त्यसले पनि उनीहरूलाई खेल्न सहज थियो । त्यस्तै, उनीहरूको आधिकारिक खेलकुद संघ छ जसले खेलाडीलाई निरन्तर खेल्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । त्यहाँ खेलाडीलाई राम्रो सेवा सुविधा उपलब्ध छ, जसले गर्दा खेलाडीले पनि आफ्नो पूरै जीवन क्रिकेटमै समर्पित गरेका छन्, तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन । हामी थाइल्यान्डसँग खेल्न नजानेर हारेका होइनौं । हामी अनुभव र म्याच एक्पोजरको कमीका कारण हारेका हौं । हाम्रा खेलाडीहरूमा प्रशस्तै सीप र क्षमता छ । हामीले थाइल्यान्डलाई जित्न कम्तीमा पनि ६ महिना अभ्यास र म्याच एक्पोजर पाउनुपर्थ्यो ।
भनेपछि नेपालको तयारी कमजोर थियो ?
हामीले आफ्ना तर्फबाट जति तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यति गरेकै थिएनौं । फिटनेसमा पनि हाम्रो कमजोरी थियो । त्यसका बाबजुद हामीले तयारीचाहिँ गरेका थियौं, तर त्यो पर्याप्त थिएन । हामीले खेलमा जति दिन सक्थ्यौं त्यति दिएकै हौं । अर्को कुरा, हामी खेलाडीहरूको भेटघाट पनि यही प्रतियोगिताका कारण मात्र भएको थियो, जसले गर्दा टिममा रहेका प्रत्येक खेलाडीलाई आफ्नो साथी खेलाडीका बारेमा बुझ्नै समय लाग्यो ।
थाइल्यान्डसँग खेल्नुभन्दा अघिको योजना कस्तो थियो ?
हामीले सुरुमा ब्याटिङ गर्ने सोचेका थियौं, तर टस हारेपछि बाध्य भएर बलिङ गर्नुपर्‍यो । बलिङ गर्दा पनि हामीले विपक्षी टिमलाई १ सय रनभित्रै अल आउट गर्ने लक्ष्य बनाएका थियौं । ब्याटिङमा हामी बलियो नै थियौं । हाम्रो मुख्य योजना सजिलैसँग रन बनाउन नदिने तथा विपक्षी टिमलाई मानसिक दबाबमा राख्ने थियो । हामीले खेल्नु अघि यस्तै स–साना कुराको योजना बनाएका थियौं ।
केटीहरू पूरै जोसमा थिए, किनभने त्यसभन्दा पहिलेको म्याचमा हामीले हार बेहोरेका थियौं । त्यसैले यो पटकचाहिँ थाइल्यान्डलाई हराउँछौं भन्ने संकल्प गरेका थियौं । मैदानमा पनि त्यो जोस देखिन्थ्यो । अर्को कुरा, उनीहरू मात्र कति च्याम्पियन हुन्छन्, यसपटक त हामी नै च्याम्पियन हुनुपर्छ भन्ने थियो । तैपनि उनीहरू हामीभन्दा १० प्रतिशतले अब्बल देखिए । त्यसैले हामीले यस्ता खालको प्रतियोगिता जित्न अझै पनि शारीरिक एवं मानसिक रूपमा थप मेहनत गर्नैपर्छ ।
जित र हारलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अहिले हामीले जुन नतिजा हात पारेका छौं, त्यो एक किसिमले भन्ने हो भने जित नै हो । किनभने हामीले २ वर्षको अन्तरालपछि खेल्दा पनि प्रतियोगिताको उपविजेता हुनु भनेको जित मात्र होइन, गर्वकै कुरा हो । यो प्रतियोगितामा मैले ह्याट्रिक पनि गरें । नेरी थापाले एउटै खेलमा ६ विकेट लिने कीर्तिमान बनाइन् । सीता रानामगरलाई प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट घोषणा गरियो । हामीले अर्को चरणका लागि योग्यता हासिल गर्न नसके पनि अहिलेका लागि हामीले प्राप्त गरेको नतिजालाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको प्रदर्शन कस्तो रह्यो ?
पूरा प्रतियोगितामा मैले आफूले सोचेजस्तो राम्रो खेल्न सकिनँ । बाहिरबाट हेर्दा रन बन्यो, विकेट लियो भन्ने होला, तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्थें । दुईवटा खेलमा मैले आफ्नो विकेट लापरबाहीकै कारणले गुमाएकी थिएँ । केही खेलमा बलिङ पनि राम्रो गर्न सकिनँ । जे होस्, पूरा प्रतियोगितामा मैले जति गर्न सकें त्योभन्दा अझ राम्रो गर्न सक्थें भन्ने कुरा अहिले पनि मेरो मनमा खेलिरहन्छ ।
प्रतियोगितामा सबैभन्दा सहज अनि सबैभन्दा गार्‍हो टिम कुन थियो ?
हामीले युनाइटेड अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कुवेतसँग सहजै खेल्यौं । चीनसँग खेल्दा ब्याटिङमा ठूलो कमजोरी देखिएपछि हामी ७७ रनमै खुम्चियौं । चीनजस्तो टिमसँग त्यति कम स्कोरमा हाम्रो इनिङ सकियो भन्ने कुरा अहिले पनि पत्याउन गार्‍हो हुन्छ । पूरा प्रतियोगितामा हामीलाई गार्‍हो भएको भनेको थाइल्यान्डसँग नै हो । अरू टिमसँग त खासै गार्‍हो भएन ।
छनोट खेलमा प्रत्येक टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा अलग–अलग रणनीति बनाइएको थियो ?
हामीले एकैपटक जित्ने योजना बनाएका थिएनौं । प्रत्येक टिमसँग छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएर खेलेका थियौं । मुख्य कुरा, हामीले राम्रो रन रेटसहित खेल्ने रणनीति बनाएका थियौं । हामीले कमजोर टिमविरुद्ध धेरै रन बनाउने तथा विपक्षी टिमलाई थोरै रनमा समेट्ने योजना बनाएका थियौं । हार–जित जे भए पनि रनरेट आफ्नो पक्षमा राखेर खेलेका थियौं । प्रतियोगितामा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाल, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र थाइल्यान्डलाई नै मानिएको थियो । अन्तिम नतिजा पनि त्यसै अनुरूप आयो ।
नेपालका लागि निर्णायक मानिएको थाइल्यान्ड र युनाइटेड अरब इमिरेट्सबीच खेल भैरहँदा तपाईंहरू के सोचिरहनुभएको थियो ?
थाइल्यान्ड बलियो छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो । थाइल्यान्डले युनाइटेड अरब इमिरेट्सलाई हराउँछ भन्ने कुरामा म ढुक्क थिएँ । किनभने प्रतियोगितामा सहभागी टिममध्ये थाइल्यान्डलाई हराउन सक्ने क्षमता नेपालसँग मात्र थियो । त्यसैले युनाइटेड अरब इमिरेट्सले थाइल्यान्डलाई हराउला र हामी माथि पुगौंला भन्ने कुरा हामीले सोचेका पनि थिएनौं ।
नेपाली महिला क्रिकेटका लागि क्यान अथवा राज्यले के–कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ?
केही पनि छैन । हामीलाई मासिक तलबसमेत उपलब्ध गराइँदैन । क्यानसँग हाम्रो सम्बन्ध पानी बाराबार जस्तै छ । उता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले महिला क्रिकेटका लागि भनेर कम्तीमा प्रधानमन्त्री कप सञ्चालन गर्दै आएको छ । भलै त्यसको व्यवस्थापकिय त्रुटि गनिसाध्य छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाली महिला क्रिकेट टिमका सदस्यहरूका लागि मासिक तलब तोक्ने कुरा उठाएको छ, त्यसले हामीलाई केही खुसी बनाएको छ । त्यसबाहेक राज्य वा क्यानका तर्फबाट हाम्रा लागि खासै कुनै काम भएको छैन ।
नेपालमा महिला क्रिकेटको विकासका लागि राज्यले के गरिदियोस् भन्ने लाग्छ ?
हामी निर्धक्कसँग क्रिकेटमा लाग्न सरकारले हाम्रो जीविकोपार्जन हुने तलबको व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसायिक क्षेत्रले पनि पुरुष खेलाडीहरूमा मात्र लगानी गरेको देखिन्छ । हामीलाई चाहिँ किन नहेरेको होला भन्ने लाग्छ । हामीले पनि केही कीर्तिमान राखेका छौं, आफ्नो स्तरअनुसार प्रदर्शन गरेका छौं । महिला क्रिकेटमा देखिएका उपलब्धिको सबैले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
यो सन्दर्भमा म आफूलाई भाग्यमानी मान्छु, किनभने मलाई परिवारबाट ठूलो आडभरोसा प्राप्त छ । मेरो घरमा मैले खासै केही गर्नु पर्दैन । मैले जे भन्यो त्यो मलाई प्राप्त हुन्छ । मैले क्रिकेटमै जीवन बिताउँछु भने पनि मलाई थुनछेक हुनेछैन, तर मैले कहिलेसम्म परिवारको आड–झरोसा लिने ?
क्रिकेटका अतिरित्त के गर्नुहुन्छ ?
केही पनि गर्दिनँ । म कुनै काम भएन भने घरमै बस्छु । अभ्यास गर्न जान्छु । अर्को कुरा, मलाई घरबाट कुनै काम गर्न कर छैन । ममा क्रिकेटबाहेक अरू कुनै क्षेत्रको ज्ञान पनि छैन । मेरो पढाइ पनि त्यति राम्रो छैन ।
पढाइ अघि बढ्न नसक्नुको कारण ?
क्रिकेट भनेर हिँडेकै कारणले मेरो पढाइ बिग्रियो । म कक्षा १२ बल्ल–बल्ल उत्तीर्ण गरेर स्नातक तहमा भर्ना भएँ । स्नातकको दोस्रो वर्षमा थिएँ, त्यही बेला क्रिकेट खेल्न जानुपर्ने भयो । परीक्षा दिन पाइनँ । म क्रिकेट छाडेर परीक्षा दिन चाहन्नथें । मलाई परीक्षाभन्दा क्रिकेट प्यारो लाग्यो । यसरी क्रिकेटमै लाग्दा चार वर्षजति पढाइ छाडें, त्यसपछि पढ्नै मन लागेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलको नेतृत्व गर्दा तपाईंले देशको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । हरेक खेलमा टिमको जित–हारभन्दा पनि देशको जित–हारले ठूलो अर्थ राख्छ । यस्तो मानसिक दबाबलाई कसरी ऊर्जामा बदल्नुहुन्छ ?
दबाब त भैहाल्छ । देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर हिँड्दा आफैंमा दबाब सिर्जना भैरहेको हुन्छ । हामीले अलिकति पनि लापरबाही गर्नु भनेको देशलाई नै हानि पुर्‍याउनु हो । एउटा नेतृत्वकर्ता भएपछि आफैंले दबाब महसुस गर्नुपर्‍यो भने बाँकी टिमले त केही पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले म हरेक खेलमा देशलाई काँधमा बोकेर हिँडेको छु भन्ने संकल्प गरेर मैदानमा प्रवेश गर्छु । म कुनै दबाबमा खेल्दिनँ । कुनै पनि खेलाडीले बिना दबाब आफ्नो खेल प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यसैले म जुनसुकै प्रतियोगितामा पनि ऊर्जाशील रूपमा प्रस्तुत हुन्छु ।
कुनै बेला क्रिकेट छाड्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो होइन ?
हामीले पनि एउटा स्तर कायम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पैसाकै कुरा आउँछ । क्रिकेट खेलेर सम्मानजनक जीवनयापन हुन नसक्ने देखेपछि कुनै बेला मैले अष्ट्रेलिया वा युनाइटेड अरब इमिरेट्स जाने तयारी गरेकी थिएँ । अहिले हामीले जुन सफलता हासिल गरेका छौं, त्यसले अहिले मेरो मनबाट विदेश पलायन हुने कुरा हटेको छ । यति सफलता हासिल गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले महिला क्रिकेटमा ध्यान दिन सकेन भने हाम्रा लागि बिदेसिनुको विकल्प हुने छैन ।
थाइल्यान्डमा दोस्रो स्थान हासिल गरेर फर्कंदा स्वागतका लागि विमानस्थलमा खेलकुदका कुनै पनि अधिकारी नपुगेको देख्दा कस्तो लाग्यो ?
एकदमै निराश भएँ । मलाई त एयरपोर्टमै रुन मन लागेको थियो । हामीलाई रेड कार्पेट, खादा, फूलमाला केही पनि चाहिएको थिएन । हामीलाई खेलकुदका एक–दुई जना पदाधिकारी आएर राम्रो खेल्नुभयो भनेर स्याबासी दिएको भए पनि त्यही कुरा ठूलो हुन्थ्यो, तर एयरपोर्टमा कसैलाई पनि नदेख्दा अलिकति पलाएको आशा पनि निराशामा परिणत भयो ।
फुर्सदको समय पनि खेलेरै बिताऊँछु । म क्रिकेटका अतिरित्त भलिबल तथा टेबलटेनिस पनि खेल्छु । गीत सुन्छु, घरमै बस्छु ।
क्रिकेटमा तपाईंको आइडल ?
पारस खड्का ।
म फिट रहन रुचाउँछु । अनुहार राम्रो देखाउन खासै केही गर्दिनँ । ब्युटिपार्लर जान मन लाग्दैन । शरीरलाई फिट राख्न व्यायाम भने गर्छुर् । नियमित जिम जान्छु, सन्तुलित आहारामा ध्यान दिन्छु ।
कस्तो फेसन रुचाउनुहुन्छ ?
चलचित्र कतिको हेर्नुहुन्छ ?
ठीक–ठीकै हेर्छु । पछिल्लो समय प्रदर्शनमा आएका चलचित्र नबिराई हेरिरहेकी छु ।
पहिलो पटक हेरेको चलचित्र ?
दर्पण छायाँ ।
कस्ता चलचित्र मन पर्छन् ?
मलाई लभ स्टोरी र कमेडी चलचित्र मन पर्छन् । अनमोल केसीको चलचित्र नबिराई हेर्छु । केही समयअघि कृ हेरेको थिएँ, अहिले क्याप्टेन हेर्ने सोचमा छु । त्यसबाहेक छक्कापञ्जा, जय भोले, लिलिबिली आदि चलचित्र पनि हेरेकी थिएँ ।
तपाईं अनमोल केसीको फ्यान हो ?
हो, म अनमोल केसीकी फ्यान हुँ ।
पुस्तक पढ्ने बानी छ ?
प्रेमप्रस्ताव कतिको आउँछन् ?
प्रेम प्रस्तावको त ताँती नै लागेको छ, तर मलाई अफेयरमा रहन मन छैन । अर्को कुरा म अहिले करियर बनाउन लागेकीले पनि त्यतातर्फ ध्यान दिएकी छैन, म त एकैपटक मागी विवाह गर्छु ।
कहिले गर्ने त ?
अबको दुई वर्षमा विवाह गर्ने सोच छ । ज्वाइँ खोज्ने जिम्मा आमालाई लगाएकी छु ।